सबै भन्दा राम्रो प्रेरक - ठूलो मानिसको लक्ष्य बारे उद्धृत
के ठूलो मानिसहरू उद्धृत भन्दा राम्रो उत्प्रेरित गर्न सक्छ? को प्रेरकों संज्ञानात्मक-व्यवहार मनोचिकित्सा गलत विचार सबै मानव दुःख को कारण हो कि दाबी गर्छन्। तिनीहरूले विश्वास भावना र व्यवहार प्रभावित छ भन्ने विश्वास गर्छन्। सकारात्मक स्रोतहरू को भूमिका सफलतापूर्वक लक्ष्य बारे aphorisms को ठूलो मान्छे को शब्दहरू प्रदर्शन गर्न सक्छन्।
सकारात्मक जानकारी प्रयोग
सकारात्मक पुष्टि सुन्न र राम्रो किताबहरु पढेर आफ्नो मन जाँगरको भर्न ठूलो मद्दत हुनेछ। तर यो यस्तो लामो अवशोषण जानकारीको लागि समय पूर्ण अभाव छ कि हुन्छ। आधुनिक जीवन यस्तो उच्च माग उहाँले शायद मानिस आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न समय छ बनाउँछ। उल्लेख छैन पुस्तकहरू पढेर वा चलचित्र हेर्दै। यस मामला मा, नयाँ हाइट्स पुग्न आफैलाई उत्प्रेरित गर्न पर्याप्त ऊर्जा ल्याउन दिन को लक्ष्य बारेमा पनि एक उद्धरण।
Brayana Treysi सफलताको लागि उद्धरण
व्यापार कोच एक वैश्विक सफलता को कठिन बाटो मा प्रारंभ गर्न निर्णय भएका सबैलाई यस्तो चेतावनी दिन्छ: "मात्र कुरा तपाईं नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ - यो आफ्नो विचार हो। तिनीहरूलाई सही प्रयोग गर्नुहोस्। "
Brayan Treysi आफ्नो क्यारियर को शुरुवात मा धेरै थियो। संसार-वर्ग कोच बनेर अघि, उहाँले गतिविधिहरु को धेरै परिवर्तन थियो - उहाँको बारेमा आफ्नो क्यारियर बिजुली छिटो थियो भन्न छैन। अन्तमा उहाँले सफल हुन कि निष्कर्षमा आए सम्म, तपाईं सफल मान्छे जस्तै सोच्न आवश्यक छ। आफ्नो मुखबाट निस्केको वचन ठूलो उद्धरण जस्तै शक्ति छ।
मानिस त अक्सर आफ्नो कार्यहरू निर्भर छैन भनेर ती कुराहरू चिन्ता मा दिन लगाइदिए छ। अक्सर, आफ्नो नियन्त्रण गर्न उपज गर्न सक्ने मात्र क्षेत्र, आफ्नो मन छ। तर, यहाँ हामी आत्म-सम्मोहन वा आत्म-छलछाम कुरा छैन। साँच्चै सफल, तपाईं जीवनको सकारात्मक पक्षहरू आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्न सिक्नुपर्छ। तर यो कला सबैभन्दा गाह्रो छ। उहाँले रूपमा सिक्ने द्वारा, एक मानिस आफूलाई भन्दा, र यसैले आफ्नो जीवन भन्दा शक्ति कमाइहाले।
सावधानी ठूलो वैज्ञानिक
पनि लक्ष्य अलबर्टा Eynshteyna बारेमा उद्धरण ज्ञात। उहाँले भन्नुभयो: "कुनै कारण यसलाई हासिल गर्न अयोग्य हालतमा सफाइ पर्याप्त उच्च छैन।" यो अभिव्यक्ति के गर्छ?
केही मानव जीवन वा मर्यादा भन्दा उच्च मूल्यांकन गर्न सकिन्छ। उद्देश्य र यसलाई प्राप्त को माध्यम वजन हुनुपर्छ र मूल्यांकन नैतिकता र मानवता को मापदण्ड अनुसार। साँच्चै, विज्ञान विभिन्न क्षेत्रहरू अनुसन्धान व्यक्ति विरुद्ध प्रयोग हुन सकेन। Cognition दुवै मानव जीवनको अवस्था सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, र सबै सभ्यता नष्ट गर्न उपकरण हो।
आइनस्टाइनका जीवनको डर र साधारण मानिस
लक्ष्य बारेमा माथि उद्धरण दैनिक जीवनमा धेरै लाभ ल्याउन सक्छ। उदाहरणका लागि, अक्सर आफ्नै परिवार खुवाउन क्रममा, मानिस अपराध को कगार मा छ। यो जायज हुन सक्छ? कसैले त जस्तो हुन सक्छ। यस मामला मात्र अवस्थाको थप गिरावट गर्न - तर अयोग्य बाटो सधैं कतै तिर जान्छ। पनि एक उच्च उद्देश्य संग, एक व्यक्ति गैरकानूनी कार्यहरू गर्न उठयो गर्न सक्दैन। पैसा कमाउन सधैं इमानदार तरिका हुन सक्छ। मात्र फरक छ कि सजिलो पैसा छैन, तर यो काल्पनिक चरित्र अन्तस्करणले शान्त छ।
लक्ष्य सेटिंग - सफलता को लागि एक अपरिहार्य सर्त
डब्ल्यू Clement स्टोन लक्ष्य बारे अर्को ठूलो उद्धरण पर्छ: "। स्पष्ट उद्देश्य - कुनै पनि उपलब्धि पहिलो चरण" अधिकांश मानिसहरू भोलि बारेमा सोच बिना बाँचिरहेका छौं। गम्भीर, के पुरानो पुस्ता केही सदस्यहरूको लागि कहिले काँही पनि असामान्य, भविष्यमा मानिसको लागि प्रतीक्षा सक्छ बारेमा जिम्मेवार सोच। यो किन छ? मान्छे, सबै एउटा तरिका वा अर्को भन्ने तथ्यलाई मा भारी भरोसा बसोबास वा भने राम्रो बन्न एक जादू छडी द्वारा गर्छन। केही आफ्नो समस्या आमाबाबुले वा राज्य सफलतापूर्वक हल गरिनेछ भन्ने आशा।
प्रवाह संग - प्रकोप गर्न बर्बाद हुन
जीवनको भुक्तानी गर्न निष्क्रिय दृष्टिकोण मा तर्साउने हुन, र त्यसपछि विशाल चासो संग बिल तिर्न सम्भावना छ। तसर्थ, यसको समग्र दृष्टिकोण र जीवन सर्वेक्षण गर्ने क्षमता सफलता प्राप्त गर्न मा यति महत्त्वपूर्ण छ। को यस कौशल थप महत्वपूर्ण एक निश्चित सपना गर्न tends। एक मानिस नै लक्ष्य, अस्पष्ट मामलामा आफ्नो मनमा आएको छ जो हासिल गर्न सक्दैन।
यति धेरै डिब्बे र व्यापार कोच, आफ्नो लक्ष्य लेख्न सिफारिस किन हप्ता, महिना वा वर्ष को लागि इच्छा को सूची, साथै योजना बनाउन छ। यो कौशल लागि आवश्यक छ को लक्ष्य प्राप्त निर्दिष्ट अवधिमा। मात्र स्पष्ट दृष्टि संग, एक व्यक्ति यो प्राप्त नजिक आउन सक्नुहुन्छ। साथै, कडा परिश्रम गरिरहेका, सबै भन्दा संभावना छ, त्यो परिणाम उहाँले सुरुमा चित्रित जो ती grandiose विचारै, जस्तै एकदम छैन भनेर पाउनुहुनेछ।
यसको लक्ष्य देखि प्रस्थान बिना मदत, जा, कुनै कुरा के राख्न र वैज्ञानिकहरू, राजनीतिज्ञ, कलाकार र अन्य ठूलो मानिसहरूको दृष्टान्त मद्दत गर्न डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ।
Prigovorka - प्राचीन अनुष्ठान extant
चीन एक्स - VIII ई.पू., ई
"Divergent", "विद्रोहीहरूले", "Alligent": सबै भन्दा राम्रो-बिक्री ट्रिलजी एक सारांश
निगालो कसरी बढ्न। रहस्य खुला।
Bulimia के हो? लक्षण, कारण र उपचार
विश्व को कुमारी कुना - भानुआटु कहाँ छ?
Bobber मोटरसाइकल। उपस्थिति को इतिहास, विशेष गरी Bobber शैली
को क्रिया को एक त्रुटिपूर्ण फारम कसरी परिभाषित गर्न
बच्चा मा sinusitis: रोग विभिन्न प्रकारका मा लक्षण
अंग्रेजी - संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य भाषा?
Nikolai Kaklimov: रेकर्ड धेरै हुँदैन!
स्टीवन स्लोन - युवा टेनिस स्टार